FAQ - Shop Shop
Mila miverina vatosoa
vatosoa.agency. Miezaka manome fahafaham-po ho an'ny mpanjifa mihoatra ny zavatra rehetra izahay. Raha ao anatin'ny 30 andro aorian'ny nandraisany ny vatosoa anao (s) dia tsy afa-po amin'ny baikonao, azonao atao ny mamerina izany ho antsika amin'ny toe-piainana tany am-boalohany sy tsy lo. Azo averina ihany mandritra ny 30 andro ny fisafoana ireo vatosoa.
Azafady azafady azafady mailaka GEMIC a Return Authorization Number (nihazakazaka) sy torolàlana famerenana fanampiny. NB: Naverina amintsika ny baiko tsy misy RAN ary averina any amin ilay mpandefa. Ny fonosana fividianana sy ny fandefasana entana dia andraikitry ny mpandefa. Ny varotra rehetra dia tapitra aorian'ny 30 andro (ny entana miverina dia tokony hatao sonia ao anatin'ny 30 andro aorian'ny fotoana ahazoana ny baiko).
Fampahafantarana fanampiny: Any amin'ny firenena maro, ny fandefasana fangatahana dia mety iharan'ny haba sy hetra ampiharina. Ireo mpividy dia tompon'andraikitra amin'ny fomba amam-panao, hetra sy adidy rehetra. Ny fiverenana natao noho ny voalaza etsy aloha dia tsy azo omena alàlana.
Ny GEMIC dia miahiahy momba ny fiarovana sy ny filan'ny mpanjifanay. Izahay dia manome antoka fa azo antoka tsara ny fizotran'ny fifanakalozana eto amintsika ary azo antoka ny fampahalalana ny mpanjifanay.
Ny GEMIC dia manaja ny mombamomba anao manokana ao amin'ny tranokalany. Ny adiresy mailakao dia mety hampiasa vetivety hiteraka mailaka na baiko.
GEMIC mampiasa cookies cookies hanatsarana ny fitsidihanao ary hahafahan'ny carte de l'écoller amin'ny Internet. Tsy misy fampahalalana momba ny tena voatahiry ao anaty cookies. Ny mofomamy dia tsy maintsy avela hampiditra ny endri-javatra rehetra misy ny tranokalanay. Raha te hahalala bebe kokoa dia mifandraisa aminay.
Azonao atao ny mandefa taratasy fanamarinana rehefa manampy zavatra ao anaty sarety ianao. Mba hanaovana izany, tsindrio ny rohy "Ampio fanamarinana vatosoa ho amin'ity entana ity" ao amin'ny pejy amin'ny antsipirihany momba ilay zavatra "atao anaty harona" bokotra. Hanokatra ny safidy fanamarinana io.
Ny vatosoa rehetra ao amin'ny GEMIC dia azo antoka araka ny voalaza. Ny mpiasan'ny manampahaizana manokana anay dia mandinika tsara sy handrefesana ny vatosoa tsirairay.
Ny vatosoa tsirairay avy amin'ny GEMIC Laboratory dia vatosoa voajanahary noforonin'ny Tany. Tsy mifangaro amin'ny "vatosoa" noforonina vita amin'ny labozika isika.
Azo antoka, azo antoka ary mora ny laboratoara GEMIC. Manome ireto fomba manaraka fandoavam-bola manaraka ireto isika amin'ny famenoana ny baikonao:
Aloa amin'ny alàlan'ny carte de crédit amin'ny alàlan'ny PayPal (tsy mila kaonty PayPal) PayPal dia manaiky an'i Visa, Visa Delta, Visa Electron, MasterCard, EuroCard, Maestro ary American Express. Ny fampahalalana momba ny fiarovana amin'ny PayPal.
Handoa amin'ny kaonty PayPal anao Mpikambana PayPal efa voamarina izahay. Fanamarihana: Raha tsy manana kaonty ianao dia afaka manokatra kaonty vaovao amin'ny alàlan'ny fanarahana ny làlan-java-mandeha amin'ny efijery.
Mandoa amin'ny fifindran'ny Western Union Rehefa mandoa ny fandefasana ny Western Union dia hotehirizina mandritra ny telo andro ny entanao. Azafady alefaso aminay ny laharan'ny fifanakalozana ara-bola (MTN #) momba ny fifindranao. Vantany vao voaray ny vola dia handrindranao ny baikonao. Fanamarihana: Ny saram-pitaterana dia tsy tokony hesorina amin'ny vola efa voaray.
Aloa amin'ny fandefasana banky mivantana Rehefa mandoa amin'ny fandefasana banky mivantana dia hotehirizina mandritra ny telo andro ny entanao. Azafady mba alefaso aminay ny code refa fangatahana famindram-bola rehefa avy nandoa vola ianao. Vantany vao voaray ny vola dia handrindranao ny baikonao. Fanamarihana: Ny saram-pitaterana dia tsy tokony hesorina amin'ny vola efa voaray.
Vantany vao vonona ny hijery ianao:
Avereno jerena ny sarety fiantsenanao ary safidio ny fomba fandefasanao. (ihany FeDex azo alaina mandritra ny krizy Covid-19.)
Tsindrio "hanohy Checkout" ary ampidiro ny adiresy fandefasana anao.
Fidio ny fomba fandoavanao ary tsindrio "andoavana izao".
Ampidiro ny fampahalalana momba ny fandoavanao, na ataovy pirinty ny torolàlana hita eo amin'ny efijery hahazoana famindrana vola. Vantany vao napetraka soa aman-tsara ny làlanao dia hahazo fanamafisana mailaka avy aminay izahay [mailaka voaaro] Fanamarihana: Azafady azonao atao ny manampy "[mailaka voaaro]”Ao amin'ny lisitry ny fifandraisana mailaka azo antoka mba hahazoana antoka fa afaka mahazo ireo mailaka fandefasana mailaka sy fandefasana mailaka izahay. Raha tsy mahazo mailaka avy aminay ianao, dia azafady mba hojerenao ilay lahatahiry mailaka na mailaka junk. Sandam-bola Ny carte de crédit sy ny fandoavam-bola PayPal dia hampandoavina vola amin'ny vola rehetra. Ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny Western Union na amin'ny alàlan'ny famindrana banky dia tsy maintsy alefa amin'ny US dolara fotsiny. Rehefa mifidy vola hafa ankoatry ny dolara amerikana, ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny anio dia hampiasaina hanovana ny vidiny aseho. PayPal sy ny banky fanodinanao (banky manome carte de crédit) dia hampiasa ny tahan'ny fifanakalozam-bola ananany hanovana ny vola, noho izany, ny fiampangana amin'ny vola voafantina dia tsy hitovy amin'ny vidiny aseho ao amin'io tranokala io. Ny sandam-bola aseho fotsiny no takian'i GEMIC. Ny sarany fanampiny dia mifototra amin'ny PayPal, ny carte de crédit anao izay manome ny politikan'ny banky na ny Western Union.
Fandefasana maimaimpoana maimaim-poana - Isan'ny kaomandy ambany indrindra: 50 $ (Ihany FeDex Azo alaina mandritra ny krizy Covid-19.)
Ny fandefasana Express dia matetika dia mandalo 3 andro ho an'ny fandefasana ary azo arahina ao amin'ny Internet isaky ny dingana. Ny parcels dia voatana feno. Ilaina ny sonia aorian'ny fandefasana. Fanaterana ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ho an'ny ankamaroan'ny firenena. Tsy misy boaty PO (afa-tsy UAE, Saudi Arabia ary Koety), APO na FPO adiresy azo ampiasaina. Fanamarihana: Raha manana 'sonia amin'ny rakitra' ianao dia miantso ny FeDex hanafoanana io fanomezan-dàlana io. Ny fonosana izay alefa tsy misy sonia, noho ny 'sonia amin'ny fisie' dia tsy azon'ny mpitantana fiantohana anay atao.
Availability Ny vatosoa rehetra aseho ho 'misy' dia an-tsokosoko ary vonona amin'ny fandefasana avy hatrany. Ny baiko dia tantanana ao anatin'ny 1 andro fiasana Alatsinainy - Zoma (anisany ny fialantsasatra). Fampahafantarana fanampiny: Any amin'ny firenena maro, izay nambara fa ny fandefasana dia ampiharina amin'ny sarany sy ny hetra. Maharitra ela kokoa ny mailaka voarakitra, fa manalavitra ny sarany fanampiny. Faly izahay fa alefa toy fanomezana, nefa tsarovy fa tsy voafehinay amin'ny fiampangana fanampiny mety hitranga amin'ny firenenao. Fanamarihana: Manana hetra na adidy ny tompon'andraikitra amin'ny mpividy. Ny entana miverimberina tsy mety noho ireo fiampangana ireo dia tsy azo ekena. Azonao atao ny mifandray aminay raha mila fandaharana manokana ianareo. faktiora Ny fonosana rehetra avy amin'ny GEMIC dia misy invoice feno. Mba miangavy re Mifandraisa aminay alohan'ny hametrahana ny baiko raha mila faktiora manokana ianao na tsy misy faktiora mihitsy.
IF : Loupe madio - tsy misy lafy; maimaimpoana.
VVS : Saika madio ny loupe - tena kely dia be ny fidirana; fehin-kevitra tsy dia hita eo ambany 10 magnification.
VS : Madio maso - kely fandrindrana; fehin-kibo kely dia ho hitan'ny maso voaofana na ao ambanin'ny 10x magnification.
SI : Voasakenda kely - azo tsoahana miaraka amin'ny maso miboridana ny fidirana kely.
I : Tafiditra - ny tombony azo jerena amin'ny maso miboridana.
AED: Emirà Arabo Mitambatra (د.إ) AFN: Afghan afghani (؋) REHETRA: Albaney lek (L) AMD: tantara an-tsehatra Armeniana (AMD) ANG: mpiady guerlande Antillean (ƒ) AOA: Angole kwanza (Kz) Ars: Argentine peso ($) AUD: Aostralianina dolara ($) AWG: Aror florin (Afl.) AZN: Azerbaijani manat (AZN) BAM: marika miovaova (KM) i Bosnia sy Herzegovina BBD: dolara Barbadian ($) BDT: Bangladeshi taka (৳) BGN: Bolgara Lev (лв.) BHD: Bahraini dinar (.د.ب) BIF: Franc burundiana (Fr) BMD: dolara Bermudian ($) BND: dolara Brunei ($) BOB: Boliviano Boliviana (Bs.) BRL: tena Breziliana (R $) BSD: dolara Bahamian ($) BTC: Bitcoin (฿) BTN: ngultrum Bhutanese (Nu.) BWP: Botsoana pula (P) BYN: belarosiana ruble (Br) BZD: dolara Belize ($) CAD: dolara kanadiana (C $) CDF: Kongoley franc (Fr) CHF: Frantsa Frantsa (CHF) CLP: Chilean peso ($) CNY: Sinoa Yuan (¥) COP: Kolombiana peso ($) CRC: Costa Rican colón (₡) CUC: Peso mora azo ($) CUP: Peso Kioba ($) CVE: Cape Verdean escudo ($) CZK: Czech koruna (Kč) DJF: Djiboutian Franc (Fr) DKK: Danish krone (DKK) DOP: Peso Dominikana (RD $) DZD: Alzeriana dinar (د.ج) EGP: Ejipsianina (EGP) ERN: Eritrea nakfa (Nfk) ETB: Birrianina etiopianina (Br) EUR: Euro (€) FJD: dolara Fijian ($) FKP: Nosy Falkland kilao (£) GBP: Pound sterling (£) GEL: Georgian lari (₾) GGP: Guernsey kilao (£) GHS: Ghana cedi (₵) GIP: kilao Gibraltar (£) GMD: Gambian dalasi (D) GNF: franc gineana (fr) GTQ: Goatemalt quetzal (Q) GYD: dolara Guyanese ($) HKD: Dollar dolara ($) HNL: Honduran lempira (L) HRK: Kroasia kuna (kn) HTG: gourde Haitian (G) HUF: Hetsika Hongria (Ft) IDR: Indonesian rupiah (Rp) ILS: sekely vaovao israeliana (₪) IMP: Manx kilao (£) INR: Rupee indianina (₹) IQD: Dinar Irak (ع.د) IRR: Iranian rial (﷼) ISK: Islandey króna (kr.) JEP: Jersey kilao (£) JMD: dolara japoney ($) JOD: Dinar Jordanian (د.ا) JPY: Japoney Yen (¥) KES: shilling Kenyan (KSh) KGS: Kyrgyzstani som (сом) KHR: riel Kambojiana (៛) KMF: Franc comorian (Fr) KPW: Koreana Tavaratra (₩) KRW: Koreana Tatsimo (won) KWD: Kuwaiti dinar (د.ك) KYD: dolara ny Nosy Cayman ($) KZT: Kazakhstani tenge (₸) LAK: Lao Koka (₭) LBP: Libaney kilao (ل.ل) LKR: Sri Lankan rupee (රු) LRD: dolara Liberiana ($) LSL: Lesotho loti (L) LYD: Dinar Libiana (ل.د) MAD: dirham dirham (د.م.) MDL: Moldova leu (MDL) MGA: Ariary Malagasy (Ar) MKD: denared Makedoniana (ден) MMK: Burmese kyat (Ks) MNT: Mongoliana tögrög (₮) MOP: Macapianina pataca (P) MUR: Rupee maorianina (₨) MVR: Maldivian rufiyaa (.mm) MWK: kwacha Malawian (MK) MXN: Mexican peso ($) MYR: Malaysian ringgit (RM) MZN: metaly mozambika (MT) NAD: Dolara Namibiana (N $) NGN: Naira Nizeriana (₦) NIO: Nikaragoà (C $) NOK: Norwegian krone (kr) NPR: Rupee Nepaley (₨) NZD: Dollar dolara ($) OMR: Omani rial (ر.ع.) PAB: Balboa Panameana (B /.) PEN: Sol (S /) PGK: Papua New Guinea Guinea (K) PHP: Philippine peso (₱) PKR: Rupee Pakistaney (₨) PLN: Poloney złoty (zł) PYG: guaraní (₲) Paraguayan QAR: Qatari riyal (ر.ق) Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny romainina RSD: serba dinar (рсд) RUB: Rosiana rosiana (₽) RWF: Rwanda franc (Fr) SAR: Saudi riyal (ر.س) SBD: Dolara Nosy Solomon ($) SCR: Seychellois rupee (₨) SDG: Sudanina kilao (ج.س.) SEK: Soedoa krona (kr) SGD: dolara amerikana ($) SHP: Saint Helena kilao (£) SLL: Sierra Leonean leone (Le) SOS: shail Somali (Sh) SRD: dolara Suriname ($) SYP: kilao Syriana (ل.س) SZL: Swazi lilangeni (L) THB: baht Thai (฿) TJS: Tajikistani somoni (ЅМ) TMT: Turkménistanistan (m) TND: Dinar Toniziana (د.ت) LOHAHEVITRA: Tongan'ny fahababoana Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny tiorka TTD: Trinidad sy Tobago dolara ($) TWD: New Taiwan dollar (NT $) TZS: shiliana Tanzaniana (Sh) UAH: Okrainiana hryvnia (₴) UGX: Famoronana Ogande (UGX) USD: Etazonia (US) dolara ($) UYU: Peso Uruguay ($) UZS: Uzbekistani som (UZS) VEF: Bolivana Venezoeliana (Bs F) VND: Vietnamese đồng (₫) VUV: Vanuatu vatu (Vt) WST: ta'i Samoa (ta) XAF: CFA franc afrikanina afovoany (CFA) XCD: Dolara Karaiba Atsinanana ($) XOF: West Africa CFA franc (CFA) XPF: CFP fr (Fr) YER: Yemenita rial (﷼) ZAR: South African rand (R) ZMW: kwacha Zambian (ZK)